Igama lesiqhelo: i-valproic acid (fall-PROE-ik AS-id) (Indlela yomlomo)
Udidi lweziyobisi: Amanqatha e-asidi avela kwi-anticonvulsants
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJuni 25, 2020.
Indlela yomlomo (iCapsule, ukukhutshwa okulibazisekileyo)
I-Hepatotoxicity (amanye amatyala abulalayo), ahlala esenzeka kwiinyanga zokuqala ezi-6 zonyango, kuye kwaxelwa kwizigulana ezifumana i-valproate kunye neziphumo zayo. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 kunye nezigulana ezinesifo se-mitochondrial zisesichengeni sokonyuka kokuhlaselwa sisifo sokufa kwesibindi. Ukusetyenziswa kuyaphikiswa kwizigulana ezineengxaki zemitochondrial ezibangelwa kukutshintsha kwemitochondrial DNA polymerase gamma (POLG) nakubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 apho kukrokrelwa ukuphazamiseka kwemitochondrial. Ukusilela kwezinye ii-anticonvulsants kuphela kwesibonakaliso sokusetyenziswa kwe-valproate kwizigulana ezindala kuneminyaka emi-2 nesifo se-mitochondrial esifa. Yenza uvavanyo lokutshintsha kwePOLG njengoko kubonisiwe eklinikhi. Ukubeka iliso kwizigulana ngokusondeleyo kwaye wenze iimvavanyo zomsebenzi wesibindi ngaphambi konyango kunye nokuhamba rhoqo emva koko, ngakumbi kwiinyanga zokuqala ezi-6. I-Valproate inokuphazamisa ukukhula kwengqondo kunye nokuvezwa kokubeleka ngaphambi kokuzalwa komntwana kwaye ivelise iziphene ezikhulu zokuzalwa, ngakumbi iziphene ze-neural tube (umzekelo, spina bifida), kunye nokuphazamiseka kwengqondo. I-Valproate iyaphikiswa kwi-prophylaxis yentloko ye-migraine kubafazi abakhulelweyo nakwabasetyhini abanokubeleka abanokungazisebenzisi izicwangcisi ezifanelekileyo. IValproate akufuneki ilawulwe kumfazi onamandla okuba ngumntwana ngaphandle kokuba amanye amayeza asilele ukubonelela ngeempawu ezaneleyo okanye engamkelekanga. Kwiimeko ezinjalo, kufuneka kusetyenziswe izinto zokuthintela ukukhulelwa. I-pancreatitis esongela ubomi ixeliwe ebantwaneni nakubantu abadala abafumana i-valproate. Amatyala enzekile kwakamsinya emva kokuqalisa kunye neminyaka eliqela emva kokusetyenziswa. Ukuba i-pancreatitis ifunyenwe, i-valproate kufuneka ipheliswe.
Indlela yomlomo (Isiraphu; Capsule, Liquid Egcwalisiweyo)
I-Hepatotoxicity (amanye amatyala abulalayo), ahlala esenzeka kwiinyanga zokuqala ezi-6 zonyango, kuye kwaxelwa kwizigulana ezifumana i-valproate kunye neziphumo zayo. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 kunye nezigulana ezinesifo se-mitochondrial zisesichengeni sokonyuka kokuhlaselwa sisifo sokufa kwesibindi. Ukusetyenziswa kuyaphikiswa kwizigulana ezineengxaki zemitochondrial ezibangelwa kukutshintsha kwemitochondrial DNA polymerase gamma (POLG) nakubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 apho kukrokrelwa ukuphazamiseka kwemitochondrial. Ukusilela kwezinye ii-anticonvulsants kuphela kwesibonakaliso sokusetyenziswa kwe-valproate kwizigulana ezindala kuneminyaka emi-2 nesifo se-mitochondrial esifa. Yenza uvavanyo lokutshintsha kwePOLG njengoko kubonisiwe eklinikhi. Ukubeka iliso kwizigulana ngokusondeleyo kwaye wenze iimvavanyo zomsebenzi wesibindi ngaphambi konyango kunye nokuhamba rhoqo emva koko, ngakumbi kwiinyanga zokuqala ezi-6. IValproate inokuphazamisa ukukhula kwengqondo kunye nokuvezwa kokubeleka ngaphambi kokuzalwa komntwana kwaye ivelise iziphene ezikhulu zokuzalwa, ngakumbi iziphene zetyhubhu ye-neural (umzekelo, spina bifida). I-Valproate iyaphikiswa kwi-prophylaxis yentloko ye-migraine kubafazi abakhulelweyo nakwabasetyhini abanokubeleka abanokungazisebenzisi izicwangcisi ezifanelekileyo. IValproate akufuneki ilawulwe kumfazi onamandla okuzala ngaphandle kokuba amanye amayeza asilele okanye awamkelekanga. Ukuthintela inzala okukuko kufuneka kusetyenziswe kwiimeko ezinjalo. I-pancreatitis esongela ubomi ixeliwe ebantwaneni nakubantu abadala abafumana i-valproate. Amatyala enzekile kwakamsinya emva kokuqalisa kunye neminyaka eliqela emva kokusetyenziswa. Ukuba i-pancreatitis ifunyenwe, i-valproate kufuneka ipheliswe.
Indlela yomlomo (iThebhulethi, ukukhutshwa okulibazisekileyo; iCapsule, ukukhutshwa okulibazisekileyo; ithebhulethi, ukukhutshwa okwandisiweyo)
I-Hepatotoxicity (amanye amatyala abulalayo), ahlala esenzeka kwiinyanga zokuqala ezi-6 zonyango, kuye kwaxelwa kwizigulana ezifumana i-valproate kunye neziphumo zayo. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 kunye nezigulana ezinesifo se-mitochondrial zisesichengeni sokonyuka kokuhlaselwa sisifo sokufa kwesibindi. Kwezi zigulana zingaphantsi kweminyaka emi-2, i-valproate sodium kufuneka isetyenziswe ngononophelo olukhulu njengearhente yodwa. Ukusetyenziswa kuyaphikiswa kwizigulana ezineengxaki zemitochondrial ezibangelwa kukutshintsha kwemitochondrial DNA polymerase gamma (POLG) nakubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 apho kukrokrelwa ukuphazamiseka kwemitochondrial. Ukusilela kwezinye ii-anticonvulsants kuphela kwesibonakaliso se-divalproex sodium kwizigulana ezindala kuneminyaka emi-2 nesifo se-mitochondrial esifa. Yenza uvavanyo lokutshintsha kwePOLG njengoko kubonisiwe eklinikhi. Ukubeka iliso kwizigulana ngokusondeleyo kwaye wenze iimvavanyo zomsebenzi wesibindi ngaphambi konyango kunye nokuhamba rhoqo emva koko, ngakumbi kwiinyanga zokuqala ezi-6. IValproate inokuphazamisa ukukhula kwengqondo kunye nokuvezwa kokubeleka ngaphambi kokuzalwa komntwana kwaye ivelise iziphene ezikhulu zokuzalwa, ngakumbi iziphene zetyhubhu ye-neural (umzekelo, spina bifida). I-Valproate iyaphikiswa kwi-prophylaxis yentloko ye-migraine kubafazi abakhulelweyo nakwabasetyhini abanokubeleka abanokungazisebenzisi izicwangcisi ezifanelekileyo. IValproate akufuneki ilawulwe kumfazi onamandla okuzala ngaphandle kokuba amanye amayeza asilele okanye awamkelekanga. Ukuthintela inzala okukuko kufuneka kusetyenziswe kwiimeko ezinjalo. I-pancreatitis esongela ubomi ixeliwe ebantwaneni nakubantu abadala abafumana i-valproate. Amatyala enzekile kwakamsinya emva kokuqalisa kunye neminyaka eliqela emva kokusetyenziswa. Ukuba i-pancreatitis ifunyenwe, i-valproate kufuneka ipheliswe.
Igama lophawu lwedipakene liphelisiwe eMelika Ukuba iinguqulelo eziqhelekileyo zemveliso zivunyiwe yi-FDA, kunokubakho okufana noko kuqhelekileyo kufumaneka .
Igama lesiqhelo eliqhelekileyo (ama)
Iifom zedosi ezikhoyo:
Capsule, Ulwelo Ogcwalisiweyo
Ithebhulethi, ukukhutshwa okulibazisekileyo
Capsule, ukukhutshwa okulibazisekileyo
Ithebhulethi, Ukukhutshwa okwandisiweyo
Iklasi yokuNyanga: iAnticonvulsant
Iklasi ye-Pharmacologic: Imbali yeDeacetylase Inhibitor
Iklasi yeekhemikhali: Valproic Acid (iklasi)
I-Valproic acid isetyenziselwa ukunyanga iintlobo ezithile zokuxhuzula (isifo sokuwa). Eli yeza liyi-anticonvulsant esebenza kwizihlunu zobuchopho ukunqanda ukuxhuzula.
I-Valproic acid ikwasetyenziselwa ukunyanga isigaba se-manic sokuphazamiseka kwengqondo (isifo sokudakumba), kwaye inceda ekuthinteleni iintlungu zentloko.
Eli yeza lifumaneka kuphela ngommiselo kagqirha wakho.
Ngaphambi kokusebenzisa iDepakene
Ukuthatha isigqibo sokusebenzisa iyeza, umngcipheko wokuthatha iyeza kufuneka ulinganiswe nokuhle oya kulwenza. Esi sisigqibo wena kunye nogqirha oza kusenza. Eli yeza kufuneka kuthathelwe ingqalelo oku kulandelayo:
Tshela ugqirha wakho ukuba wakhe wanayo nayiphi na into engaqhelekanga okanye eyaliwa kukusabela kweli yeza okanye amanye amayeza. Xelela ukhathalelo lwempilo yakho ukuba unazo naziphi na ezinye iintlobo zokwaliwa, njengokutya, idayi, izinto ezisigcinayo, okanye izilwanyana. Kwiimveliso ezingezizo zokuyalelwa, funda ilebhile okanye izinto zokupakisha ngononophelo.
Izifundo ezifanelekileyo ezenziweyo ukuza kuthi ga ngoku azibonisanga iingxaki ezithile zabantwana ezinokuthi zinciphise ukubaluleka kwe-valproic acid ebantwaneni. Nangona kunjalo, ukhuseleko nokusebenza ngokufanelekileyo akukhange kusekwe kubantwana abanesathuthwane abangaphantsi kweminyaka eli-10 ubudala , kunye Kubantwana abane-migraine abangaphantsi kweminyaka eyi-12 ubudala . Ngenxa yetyhefu ye-valproic acid, ukusetyenziswa kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala kufuna ulumkiso olukhulu.
Izifundo ezifanelekileyo ezenziweyo ukuza kuthi ga ngoku khange zibonise iingxaki ezithile zejometri ezinokuthi zinciphise ukusebenziseka kwe-valproic acid kubantu abadala. Nangona kunjalo, abaguli abalupheleyo kunokwenzeka ukuba babe neziphumo ezingafunekiyo (umz., Ukungcangcazela okanye ukozela okungaqhelekanga), ezinokufuna uhlengahlengiso kwidosi yezigulana ezifumana i-valproic acid.
Akukho zifundo zaneleyo kwabasetyhini zokumisela umngcipheko kwiintsana xa usebenzisa eli yeza ngexesha lokuncancisa. Linganisa izibonelelo ezinokubakho ngokuchasene nobungozi obunokubakho ngaphambi kokuba uthathe eli yeza ngelixa uncancisa.
Nangona amayeza athile engafanelanga ukuba asetyenziswe kunye, kwezinye iimeko amayeza amabini ahlukeneyo anokusetyenziswa kunye nokuba kunokubakho ukudibana. Kule meko, ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha idosi, okanye ezinye iindlela zokuthintela kunokuba yimfuneko. Xa uthatha eli yeza, kubaluleke ngakumbi ukuba uchwepheshe wakho wokhathalelo lwempilo azi ukuba uthatha nawaphi na amayeza adweliswe apha ngezantsi. Oku kunxibelelana kulandelayo kukhethwe kwisiseko sokubaluleka okunokubakho kwaye ayisiyiyo yonke into ebandakanyayo.
Ukusebenzisa eli yeza kunye naliphi na kula mayeza alandelayo akuqhelekanga, kodwa kunokufuneka kwezinye iimeko. Ukuba omabini la mayeza amiselwe kunye, ugqirha wakho angalitshintsha idosi okanye ulisebenzise kangaphi elinye okanye omabini amayeza.
Ukusebenzisa eli yeza kunye naliphi na kula mayeza alandelayo kunokubangela umngcipheko okhulayo weziphumo ebezingalindelekanga ezithile, kodwa ukusebenzisa omabini la machiza kunokuba lolona nyango lulungileyo kuwe. Ukuba omabini la mayeza amiselwe kunye, ugqirha wakho angalitshintsha idosi okanye ulisebenzise kangaphi elinye okanye omabini amayeza.
Ukudibana nokutya / icuba / utywala
Amayeza athile akufuneki asetyenziswe ngexesha okanye malunga nexesha lokutya ukutya okanye ukutya iintlobo ezithile zokutya kuba unxibelelwano lunokwenzeka. Sebenzisa utywala okanye icuba kunye namayeza athile kunokubangela ukuba kwenzeke unxibelelwano. Xoxa nengcali yezempilo malunga nokusetyenziswa kwamayeza akho ngokutya, utywala, okanye icuba.
Ezinye iingxaki zonyango
Ubukho bezinye iingxaki zonyango zinokuchaphazela ukusetyenziswa kweli yeza. Qinisekisa ukuba uxelele ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki yonyango, ngakumbi:
Ukuphazamiseka kwimetabolism (okuzalwa sisifo esichaphazela imetabolism) okanye
Ukudodobala kwengqondo kunye nokuphazamiseka kakhulu-Sebenzisa ngononophelo. Ngamana unokunyusa umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga ezibi kakhulu.
Uxinzelelo, okanye imbali okanye
Ukugula ngengqondo, okanye imbali okanye
Ipancreatitis (ukudumba kwepancreas) okanye
I-Thrombocytopenia (inani eliphantsi leplatelet) okanye
Usulelo lwentsholongwane (umzekelo, i-HIV, usulelo lwe-cytomegalovirus) -Sebenzisa ngononophelo. Ingazenza mandundu ezi meko.
Isifo sesibindi okanye
Intloko ye-Migraine kwabasetyhini abakhulelweyo okanye
Isifo seMitochondrial, kubandakanya isifo seAlpers-Huttenlocher (isifo semfuza) okanye
Ukuphazamiseka komjikelo we-Urea (ukuphazamiseka kwemfuza) —Akufanele kusetyenziswe kwizigulana ezinale miqathango.
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kweDepakene
Eli candelo libonelela ngolwazi malunga nokusetyenziswa okufanelekileyo kwenani leemveliso eziqukethe i-valproic acid. Isenokungangqinelani ngqo nedepakene. Nceda ufunde ngononophelo.
Thatha la mayeza ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe ngugqirha wakho . Sukuyithatha ngaphezulu, sukuyithatha rhoqo, kwaye ungayithathi ixesha elide kunokuba ugqirha ugqirha.
Eli yeza liza neSikhokelo seyeza okanye iphetshana lolwazi ngesigulana. Funda kwaye ulandele imiyalelo ngononophelo. Buza ugqirha wakho ukuba unemibuzo.
Ginya ifayile ye- Iifomsile zokukhululwa ezilibazisekileyo okanye njengezingxobo zomlomo epheleleyo ngeglasi epheleleyo yamanzi. Musa ukwahlula, ukutyumza, okanye ukuhlafuna. Ungawathatha la mayeza kunye nokutya ukunciphisa isisu.
Ukuba awukwazi ukuginya philisi iphela, unokuyivula kwaye ufefe imixholo kwinto encinci yokutya okuthambileyo (kubandakanya iapile okanye ipudding).
Linganisa i ulwelo lomlomo iyeza elinepuni yokulinganisa ephawulwe, isirinji yomlomo, okanye ikomityi yeyeza.
Umthamo weliyeza uya kwahluka kwizigulana ezahlukeneyo. Landela imiyalelo yakho kagqirha okanye imiyalelo kwileyibhile. Olu lwazi lulandelayo lubandakanya kuphela iidosi eziphakathi zeli yeza. Ukuba idosi yakho yahlukile, ungayitshintshi ngaphandle kokuba ugqirha wakho akuxelele ukuba wenze njalo.
Inani lamayeza owathathayo lixhomekeke kumandla eyeza. Kwakhona, inani leedosi ozithathayo suku ngalunye, ixesha elivunyelweyo phakathi kweedosi, kunye nobude bexesha olithathayo amayeza lixhomekeke kwingxaki yezonyango oyisebenzisela iyeza.
Kwiifom zedosi yomlomo (iifomsile, iifomsile zokulibaziseka, kunye nesisombululo):
Abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka eli-10 ubudala okanye ngaphezulu-I-Dose isekwe kubunzima bomzimba kwaye kufuneka ichongwe ngugqirha wakho. Ekuqaleni, idosi eqhelekileyo sisi-10 ukuya kwi-15 seemiligram (mg) ngekhilogram (kg) yobunzima bomzimba ngosuku. Ugqirha wakho unokunyusa ngokuthe ngcembe idosi yakho veki nganye nge-5 ukuya kwi-10 mg ngekg yesisindo somzimba njengoko kufuneka. Nangona kunjalo, idosi ihlala ingekho ngaphezulu kwe-60 mg ngekg yesisindo somzimba ngosuku. Ukuba idosi iyonke ngosuku ingaphezulu kwe-250 mg, ihlala yahlulwa yangamayeza amancinci kwaye ithathe amaxesha ama-2 okanye nangaphezulu emini.
Abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-10 ubudala-Ukusetyenziswa kunye nedosi kufuneka kugqitywe ngugqirha wakho.
Kwifom yethamo lomlomo (iifomule zokukhupha ukulibaziseka):
Abantu abadala-Ekuqaleni, i-750 milligrams (mg) kanye ngemini, zihlala zahlulwe ngeedosi ezincinci. Ugqirha wakho unokunyusa idosi yakho njengoko kufuneka.
Bantwana-Ukusetyenziswa kunye nedosi kufuneka kugqitywe ngugqirha wakho.
Abantu abadala-Ekuqaleni, i-250 milligrams (mg) amaxesha ama-2 ngosuku. Ugqirha wakho unokunyusa idosi yakho njengoko kufuneka. Nangona kunjalo, idosi ihlala ingekho ngaphezulu kwe-1000 mg ngosuku.
Ukuba uphosa idosi yeli yeza, yithabathe ngokukhawuleza okukhulu. Nangona kunjalo, ukuba phantse lixesha ledosi yakho elandelayo, tsiba idosi ephosiweyo kwaye ubuyele kwishedyuli yakho yesiqhelo yedosi. Sukuyiphinda kabini idosi.
Gcina iyeza kwisitya esivaliweyo kubushushu begumbi, kude nobushushu, ukufuma, kunye nokukhanya ngqo. Gcina ekubambeni.
Gcina kude nokufikelela kwabantwana.
Sukugcina amayeza okanye amayeza aphelelwe lixesha.
Buza kwingcali yakho yezempilo ukuba ungalahla njani nawaphi na amayeza ongawasebenzisiyo.
Amanyathelo okhuseleko ngelixa usebenzisa idepakene
Kubaluleke kakhulu ukuba ugqirha wakho ajonge inkqubela phambili yomntwana wakho Ngelixa usebenzisa eli yeza ukubona ukuba lisebenza ngokufanelekileyo na kwaye uvumela utshintsho kwidosi. Uvavanyo lwegazi kunye nomchamo lunokufuneka ukukhangela naziphi na iziphumo ezingafunekiyo.
Sebenzisa eli yeza ngelixa ukhulelwe (ngakumbi kwiinyanga ezintathu zokuqala zokukhulelwa) kunokulimaza usana lwakho olungekazalwa kwaye kubangele iziphumo ezingathandekiyo (umzekelo, iingxaki zobuchopho okanye zobuso, iingxaki zentliziyo okanye zomthambo wegazi, iingxaki zengalo okanye zomlenze, okanye ubukrelekrele okanye ingqondo iingxaki). Sebenzisa indlela esebenzayo yolawulo lokuzalwa ukuze ungakhulelwa. Ukuba ucinga ukuba ukhulelwe ngelixa usebenzisa iyeza, xelela ugqirha wakho ngoko nangoko.
Kubaluleke kakhulu ukuthatha i-folic acid ngaphambi kokukhulelwa kwaye ngexesha lokukhulelwa kwasekuqaleni ukunciphisa amathuba okuba neziphumo ebezingalindelekanga eziyingozi kusana lwakho olungekazalwa. Buza ugqirha wakho okanye usokhemesti akuncede ukuba awuqinisekanga ukuba ungayikhetha njani imveliso ye-folic acid.
Iingxaki zesibindi zinokwenzeka ngelixa usebenzisa eli yeza, kwaye ezinye zinokuba nzulu. Jonga ugqirha ngoko nangoko ukuba uneempawu ezingaphezulu kwesinye: iintlungu zesisu okanye isisu okanye ukuthamba, izitulo ezinombala wodongwe, umchamo omnyama, ukuncipha kokutya, umkhuhlane, intloko ebuhlungu, ukurhawuzelela, ukungabi namdla, isicaphucaphu nokugabha, ulusu irhashalala, ukudumba kweenyawo okanye imilenze esezantsi, ukudinwa okungaqhelekanga okanye ubuthathaka, okanye amehlo atyheli okanye ulusu.
i-nitrofurantoin mono / mac 100mg caps
IValproic acid inokubangela abanye abantu ukuba baphazamiseke, babe nomsindo, okanye babonise ezinye iindlela zokuziphatha ezingaqhelekanga. Inokubangela abanye abantu ukuba babe neengcinga zokuzibulala kunye notyekelo lokudakumba. Ukuba uqaphela nayiphi na le miphumo, xela ugqirha wakho kwangoko.
I-Valproic acid inokubangela ukungahambi kakuhle komzimba okuchaphazela amalungu omzimba amaninzi (umz., Isibindi okanye izintso). Jonga ugqirha ngoko nangoko ukuba unale mpawu ilandelayo: umkhuhlane, umchamo omnyama, intloko ebuhlungu, irhashalala, iintlungu zesisu, ukudumba kwamadlala enzonzobila entanyeni, ekhwapheni, okanye empumlweni, ukudinwa okungaqhelekanga, okanye amehlo amthubi okanye ulusu.
I-Pancreatitis inokwenzeka ngelixa usebenzisa eli yeza. Xelela ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba unesihlungu esibuhlungu ngesiquphe kwaye sinzima, ukugodola, ukuqhina, isicaphucaphu, ukugabha, umkhuhlane, okanye iintloko.
Jonga ugqirha wakho ngoko nangoko ukuba umkhuhlane, umqala obuhlungu, irhashalala, izilonda emlonyeni, ukuphuma kweempumlo, ukuphuma kweentsini, ukudumba kwamadlala, okanye amabala amancinci abomvu okanye ansomi kulusu lwenzeka. Oku kunokuba ziimpawu zengxaki enkulu yegazi.
Jonga kwangoko ugqirha wakho ukuba ukozela ngendlela engaqhelekanga, ukuba buthuntu, ukudinwa, ukuba buthathaka okanye ukuziva ukonqena, ukutshintsha kwemeko yengqondo, ubushushu bomzimba obuphantsi, okanye ukugabha. Ezi kunokuba ziimpawu zesimo esibi esibizwa ngokuba yi-hyperammonemic encephalopathy.
I-asidi yeValproic inokubangela abanye abantu ukuba babe nesiyezi, babe nentloko elula, bayozele, okanye baphaphe kancinci kunesiqhelo. Musa ukuqhuba okanye wenze enye into enokuba yingozi de ube uyazi ukuba lukuchaphazela njani eli yeza .
Sukuyeka ukusebenzisa eli yeza ngaphandle kokujonga kuqala kugqirha . Ugqirha wakho unokufuna ukuba unciphise imali oyisebenzisayo ngaphambi kokuyeka ngokupheleleyo. Oku kunokunceda ukuthintela ukwanda kokubanjwa kunye nokunciphisa ukubakho kweempawu zokurhoxa.
Ngaphambi kokuba wenze uvavanyo lwezonyango, xelela ugqirha ophetheyo ukuba uthatha eli yeza. Iziphumo zovavanyo oluthile zinokuchaphazeleka kweli yeza.
Eli yeza longeza kwiziphumo zotywala kunye nezinye i-CNS depressants (amayeza abangela ukozela). Eminye imizekelo yoxinzelelo lwe-CNS zii-antihistamines okanye amayeza e-hay fever, ezinye izinto ezibangela ukuba ungaliwa, okanye ukubanda, i-sedatives, i-tranquilizers, okanye amayeza okulala, amayeza eentlungu okanye amayeza okubulala iintlungu, amayeza okubamba (umz. Iintlungu zamazinyo. Jonga ugqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe nayiphi na kwezi zinto zingasentla ngelixa usebenzisa eli yeza .
Ukuba ucwangcisa ukuba nabantwana, thetha nogqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa eli yeza. Abanye abantu abafumana eli yeza baye bazale (abangakwazi ukuba nabantwana).
Musa ukuthatha amanye amayeza ngaphandle kokuba kuxoxwe nogqirha wakho. Oku kubandakanya amayeza kagqirha okanye angabhaliswanga (e-okhawuntareni [OTC]) kunye namayeza esintu okanye iivithamini.
Iziphumo ebezingalindelekanga zedepakene
Kunye neziphumo ezifunekayo, iyeza linokubangela iziphumo ezingafunekiyo. Nangona ingezizo zonke iziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka, ukuba ziyenzeka zisenokufuna unyango.
Jonga ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ngaba kukho ezinye zeempembelelo ezilandelayo:
ukudumba okanye ukudumba kobuso, iingalo, izandla, imilenze esezantsi okanye iinyawo
igazi kumchamo okanye ilindle
Ukukhohlisa intshutshiso, ukungathembani, ukukrokrela, okanye ukulwa
ukuphefumla nzima okanye ukusebenza nzima
iinkolelo zobuxoki ezingenakutshintshwa yinyani
ubuxoki okanye into engaqhelekanga yempilo-ntle
imvakalelo ngokubanzi yokungonwabi okanye ukugula
Ukuphelelwa ngumdla wokutya
iintlungu ezisezantsi okanye ezisecaleni
ukuchama kabuhlungu okanye kunzima
khomba amabala abomvu kulusu
ukuqonda okungafanelekanga kunye nokugweba
iingxaki ngememori okanye intetho
Ukukhawuleza ukusabela okanye ukurhabaxa ngokweemvakalelo
ukutshintsha kwemoods ngokukhawuleza
imvakalelo yokuzahlula kwisiqu sakho okanye emzimbeni
ukugungqa emilenzeni, ezingalweni, ezandleni, okanye ezinyaweni
ukozela okanye ukozela ngokungaqhelekanga
ukurhawuzelela kwezandla okanye kweenyawo
ukungcangcazela okanye ukushukumisa izandla neenyawo
ingxaki yokuqonda izinto
ingxaki yokucinga nokucwangcisa
ukopha okungaqhelekanga okanye ukugruzuka
ukudinwa okungaqhelekanga okanye ubuthathaka
ubunzima okanye ilahleko engaqhelekanga
ukungabikho okanye ukunciphisa ukuhamba komzimba
umchamo wegazi okanye onamafu
ukutshisa, ukukhasa, ukurhawuzelela, ukuba ndindisholo, ukuhlaba, 'izikhonkwane neenaliti', okanye ukurhawuzelela
utshintsho ekuhambeni nasekulinganiseni
utshintsho kwiipateni nakwizingqisho zentetho
ukungaqiniseki okanye ukungazinzi
ukuphefumla okunzulu okanye okukhawulezayo ngesiyezi
isifo esiqhekezayo kwilungu
utywala, utyhafa, okanye intloko elula xa uvuka ngokukhawuleza kwindawo yokulala okanye ukuhlala
ithoni yemisipha egqithileyo
ngokukhawuleza, ngokungaqhelekanga, ukubetha, okanye ukubetha kwentliziyo okanye ukubetha
imvakalelo yobushushu okanye ubushushu
ndiziva ndilusizi okanye ndingenanto
ukugungxula okanye ukuba bomvu kwesikhumba, ngakumbi ebusweni nasentanyeni
Ukuhlala urhalela ukuchama
ukuphuma kwegazi kwilungu lobufazi elinzima
ukwanda kwesidingo sokuchama
Amabala amakhulu, athe tyaba, aluhlaza okwesibhakabhaka okanye amfiliba eluswini
ukubetha ngomlomo okanye ukufunxa
ukulahleka kolawulo lwesinyi
Ukuphulukana nomdla okanye ukonwaba
ukuphelelwa ngamandla okanye amandla
izilonda ezininzi zolusu ezidumbileyo
iintlungu zemisipha okanye ukuqina
uxinzelelo lwezihlunu okanye ukuqina
ukopha okuqhelekileyo kokuya exesheni okwenzeka ngaphambili, okunokwenzeka kuhlala ixesha elide kunokuba bekulindelwe
Ukuba ndindisholo kweenyawo, izandla nokujikeleza umlomo
Iintlungu esiswini, ecaleni, okanye esiswini, ezinokubakho emva komva
ukuhambisa umchamo rhoqo
intshukumo ekhawulezayo okanye efana neentshulube yolwimi
ukubona, ukuva, okanye ukuziva izinto ezingekhoyo
ukungazinzi kunye nokuhamba okungazinzanga
amabala amancinci abomvu okanye amfusa eluswini
ukungalawuleki kweentshukumo zokuhlafuna
ukungalawuleki kokuhamba kweengalo nemilenze
ukungazinzi, ukungcangcazela, okanye ezinye iingxaki kulawulo lwemisipha okanye ukulungelelanisa
ukugabha igazi okanye into ebonakala ngathi yindawo yekhofi
Amehlo atyheli okanye ulusu
ukudubula, ukuxobuka, ukukhululeka kolusu
iintlungu zethambo, ukuthamba, okanye ukuqaqanjelwa
kunciphise ukuphuma komchamo
uziva ngathi abanye bakubukele okanye balawula indlela oziphatha ngayo
uziva ukuba abanye banokuva iingcinga zakho
ukuziva, ukubona, okanye ukuva izinto ezingekhoyo
urhudo, ukurhawuzelela, irhashalala
ukwanda kobuntununtunu besikhumba elangeni
intlungu edibeneyo okanye yemisipha
ukulahleka kolawulo lokulinganisela
ubuso obufana nemaski
iintlungu emqolo, iimbambo, iingalo, okanye imilenze
iintlungu okanye ukudumba ezingalweni okanye emilenzeni ngaphandle kokonzakala
ukudumba okanye ukudumba kweenkophe okanye ukujikeleza amehlo, ubuso, imilebe, okanye ulwimi
izilonda ezibomvu zolusu, zihlala zenziwe ngombala omfusa
bomvu, amehlo acaphuka
ububomvu okanye okunye ukutshintsha kombala kolusu
imo enkulu okanye utshintsho lwengqondo
ukutshiswa lilanga kakhulu
ukubetha kwentliziyo kancinci
izilonda, izilonda, okanye amabala amhlophe emlonyeni okanye emilebeni
ukuqina kweengalo nemilenze
ukudumba kobuso, amaqatha, okanye izandla
amadlala adumbileyo okanye abuhlungu
iintshukumo ezi-tic-like (jerky) zentloko, ubuso, umlomo, nentamo
Fumana uncedo olukhawulezileyo kwangoko ukuba ngaba kukho ezi mpawu kwezi zilandelayo:
ukubetha kwentliziyo kancinci okanye okungaqhelekanga
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zinokwenzeka ukuba zihlala zingadingi ngonyango. Ezi ziphumo bezingalindelekanga zinokuhamba ngexesha lonyango njengoko umzimba wakho uhlengahlengisa iyeza. Kwakhona, umsebenzi wakho wezempilo unokukwazi ukukuxelela malunga neendlela zokuthintela okanye ukunciphisa ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga. Jonga umsebenzi wakho wokhathalelo lwempilo ukuba ngaba ezi zinto zilandelayo ziyaqhubeka okanye ziyakukhathaza okanye ukuba unemibuzo ngazo:
iintlungu zomzimba okanye iintlungu
Ukuqhubeka nokukhala okanye ukubhuza okanye enye ingxolo engachazwanga ezindlebeni
ukulahleka kweenwele okanye ukucheba kweenwele
ukunqongophala okanye ukuphelelwa ngamandla
ithenda, idumbile amadlala entanyeni
Ukungabikho, ukungabikho, okanye ukuhamba kwexesha elingavumelekanga
ukutshisa, ukoma, okanye ukurhawuzelela amehlo
utshintsho kwincasa okanye embi engaqhelekanga okanye engathandekiyo (emva) incasa
izilonda ezimilise okomqolo kulusu
ukukhohlela kuvelisa yencindi
ukukhupha okanye ukukrazula okugqithisileyo
Umoya ogqithisileyo okanye irhasi esiswini okanye emathunjini
imvakalelo yokuhamba rhoqo kwesiqu sakho okanye kwindawo ekungqongileyo
ukurhawuzelelwa kwilungu lobufazi okanye indawo yesini
ukuphulukana nolawulo lwamathumbu
iintlungu ngexesha lokwabelana ngesondo
iintlungu okanye ukuthamba kufutshane namehlo kunye neentsika
irhashalala enezicu ezicaba tyaba okanye izilonda ezincinci eziphakanyisiweyo kulusu
ubomvu okanye ukudumba endlebeni
ubomvu, iintlungu, ukudumba kwamehlo, ijwabu leso, okanye ulwelwesi lwangaphakathi lwenkophe
ububomvu, ukudumba, okanye ukukrakra kolwimi
yokuyeka ukopha exesheni
ukujiya okumhlophe, okumhlophe okukhupha ngaphandle kwevumba okanye ngevumba elithozamisayo
utshintsho kumbala weenwele okanye ubume
ukuguqulwa kwamazipho okanye iinzipho
ukukhula kweenwele, ngakumbi ebusweni
ukuphuma kobisi okungalindelekanga okanye okugqithileyo kumabele
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zingenzeka kwezinye izigulana. Ukuba uphawula nayiphi na eminye imiphumo, jonga kubuchwephesha bakho.
Shayela ugqirha wakho malunga neengcebiso. Unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwi-FDA ngo-1-800-FDA-1088.
Inkcukacha ezithe vetshe
Njalo qhagamshelana nomboneleli wakho wezempilo ukuqinisekisa ukuba ulwazi oluboniswe kweli phepha lisebenza kwiimeko zakho zobuqu.
iziphumo ebezingalindelekanga zeadipex
I-5 dextrose kwi-saline eqhelekileyo
i-oxycodone 5-325 ephezulu
kukuthini ukutya okune-purines
ukutya okuthambileyo imenyu yokutya
isetyenziselwa ntoni iklonopin